ညီမလေးအတွက်နှစ်သစ်လက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ညီမလေးအတွက်နှစ်သစ်လက်ဆောင်
Posted by naywoon ni on Dec 29, 2010 in My Dear Diary |9comments
Happy New Year 2011 ….လို့စာပို့လိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကို့သူငယ်ချင်းတွေက မေ့နေကြလို့ပဲလား သတိမရတာလား? သူတို့အတွက် အရေးမပါလို့ပဲလားမသိဘူး ဘယ်သူဆီကမှဒီလိုစာမျိုး မပို့ကြဘူး။ ညီမလေးကအမှတ်တရ ပို့ပေးလို့သာ နှစ်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာ သတိရသွားတာ။ နို့မို့ဆို သင်္ကြန် နှစ်ကူးတာလောက်ပဲ သိတာ ။ ခရစ်နှစ်ပြောင်းသွားတာလောက်တော့ မေ့မေ့လျော့လျော့ပဲ။ တစ်ခါနှစ်ခါကြိုးစားရုံနဲ့ မအောင်မြင်တိုင်း ငါ့ကုသိုလ်ကံက မကောင်းတာပါလို့ ကံကိုလွှဲချခြင်းကို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းနဲ့ ရောထွေးနေတဲ့ ညီမကို အမြင်မှန်ရအောင်ပြောပြပေးတဲ့ အတွက်ဆိုလို့ ညီမငယ် သောမတ်အက်ဒီဆင်ဆိုတာကြားဖူးမှာပေါ့။ မီးလုံးတွေ ထွင်ခဲ့တာလား? 999 ကြိမ် ထိမအောင်မြင်တော့ သူ့တပြည့်က လက်လျော့လိုက်ဖို့ ပြောတော့ သူကပြန်ပြောခဲ့တာလေ။ “ငါတို မဖြစ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်း 999 ခုတောင်သိသွားပြိ တဲ့ အဲဒိနည်းလမ်းပေါင်း 999 ခုရှောင်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်စမ်းကြည့်ကြရအောင်” တဲ့လေ ဘယ်လောက်မှတ်သားဖို့ကောင်းလဲ သူသာအဲဒိလိုမလုပ်ခဲ့ရင် ဒီနေ့ မီးလင်းပါ့မလား တွေးစရာနော် ။ ညီမတို့က အဲဒိလောက်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး ။ လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စ မျိုးကိုယ့်ကျမှ အညံ့မခံဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မွေးနိုင်ရင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ငြင်းရခုန်ရတဲ့ကိစ္စ ရျောင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ညီမရယ်။ အကိုဆိုရင် တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှမသိမသလို နေပစ်လိုက်တာ ၀င်ကိုပြောမနေတော့ဘူး။ တစ်ချို့က ငြင်းရခုန်ရတာကို ဂုဏ်တစ်မျိုးထင်နေတာ ဒီအကြောင်းအရာ သူတို့သိလို့ ပြောနိုင်ဆိုနိုင် ငြင်းနိုင် ခုန်နိုင်တယ်ပေါ့။ အဲဒိလို လူမျိုးတွေကိုတော့ ဝေးဝေးကရှောင်ညီမရေ…..။ကိုယ့်ဖာသာကိုသာ ပညာရင့်သန်အောင်အားထုတ်ပေါ့ညီမရယ်။ ပညာကြီးရင့်ခြင်း(၈)ပါး ရှိတယ်တဲ့။အဲဒါတွေကတော့-
၂။ အခြေံအရံ အကျော်အစောများခြင်း
၄။ ဆရာသမားထံ အမြဲ ချဉ်းကပ်ခြင်း
၅။ အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းခြင်း
၈။ သင့်လျော်သောအရပ် `၌နေထိုင်ရခြင်း တိုပဲဖြစ်တယ်။
အဲဒိတော့ ပလွှားတတ်သူ တွေနဲ့ ငြင်းခုန်နေမဲ့အစား ကိုယ့်ဖာသာကို ပညာဝမ်းစာပြည့်ဖို့အရင်လုပ်ပါ။
ဪ… အလှူအတန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရဦးမယ် ။အကိုတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမပေးလှူရတဲ့ အရာ ဆယ်ပါးရှိတယ်တဲ့နော်။ အဲဒါတွေကတော့
၄။ နွားမအုပ်ထဲသို့ နွားလားဥဿဘ လွှတ်ပေးသောအလှူ
၅။ ကာမဂုဏ်နှင် စက်စပ်သော စာ/ပန်းချီ ဆေးရေး အလှူ
၉။ ကြက်ဝက် အလှူ
၁၀။ချိန်စဉ်းလဲ၊တောင်းစဉ်းလဲ အလှူ တဲ့ အဲဒါတွေရှောင်ဖို့လိုတယ်နော်။ ဘာသာရေး စကားတွေသာပြောနေတာ အကိုက သိပ်တော့ သိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှစ်သစ်မှာ ညီမလေးသိထားသင့်တာလေးတွေပြောပြ ပေးသင့်တယ် ထင်လို့ အလွယ်ရှိနေတဲ့ စာအုပ်ထဲကကူးပေးလိုက်တာနော်။
နောက်အကိုနားလည်သလိုပဲပြောမယ်နော်။ လူတွေဟာ သံ သရာ ရျည်မှာတော့ကြောက်ကြတယ်။ လုပ်နေတာတွေကတော့ သံသရာ ရှည်မဲ့ အလုပ်တွေ ချည့်လုပ်နေကြတာကလား။ တကယ်တန်းသံသရာကို ရက်တိုတို နဲ့ရောက်ချင်ရင်တော့ ပဋိစ္စ သမုပ္ပဒ် ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပေတော့။ ဒီနေရာမှာအကိုနားလည်တာက –
အင်္ဂလိပ်လိုတော့( law of dependent origination)လို့ပဲခေါ်မလား(cycle of rebirth) လို့ခေါ်မလားပဲ ။
အဲဒိမှာ အကြောင်းအရာ(၁၂)ချက်ရှိတယ်။ ညီမတို့ကဒါကို စက်ဝိုင်းနဲ့ လေ့လာ သင်ယူဖူးချင် သင်ယူဖူးမှာပေါ့။
အဲဒိ အကြောင်းကြောင်းကိုမှီလျှက် ကောင်းစွာ အကြောင်းအားလျောစွာ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ အချက်တွေကတော့
၁။ အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခရာ
အ၀ိဇ္ဇာ ကိုအကြောင်း ပြု၍ သင်္ခါရ ဖြစ်လာရသတဲ့
၂။ သင်္ခါရာ ပစ္စယာ ၀ိဉာဏံ
သင်္ခါရ ကိုအကြောင်းပြု၍ ပဋိသန္ဓေ ၀ိညာဏ ဖြစ်လာသတဲ့
၃။ ၀ိဉာဏ ပစ္စယာ နာမရူပံ
ပဋိသန္ဓေ ၀ိညာဏ ကိုကြောင်းပြုလို့ နာမ်ရုပ်ဖြစ်လာရသတဲ့။
၄။ နာမရူပံ ပစ္စယာ သဠာတံနံ
၅။ သဠာယတန ပစ္စယာ ဖသော
အာရုံခြောက်ပါး ကိူအကြောင်းပြုလို့ ထိတွေ့မှု ဖြစ်လာရသတဲ့
၆။ ဖဿ ပစ္စယာ ဝေဒနာ
ထိတွေ့မှုကို အကြောင်းပြုလို့ ခံစားမှုဖြစ်လာရသတဲ့။
ရ။ ဝေဒနာ ပစ္စယာ တဏှာ
ခံစားမှု ကိုအကြောင်းပြုလို့ တပ်မက်မှုဖြစ်လာရသတဲ့။
၈။ တဏှာ ပစ္စယာ ဥပါဒါနံ
တပ်မက်မှုကို အကြောင်းပြုလို့ စွဲလမ်းမှု ဖြစ်လာရသတဲ့။
၉။ ဥပါဒါန ပစ္စယာ ဘဝေါ
စွဲလမ်းမှုကို အကြောင်းပြုလို့ ကမ္မဘ၀ ဖြစ်လာရသတဲ့
၁၀။ ဘ၀ ပစ္စယာ ဇာတိ
ကမ္မ ဘ၀ကိုအကြောင်းပြုလို့ ပဋိသန္ဓေ နေရသတဲ့။
၁၁။ ဇာတိ ပစ္စယာ ဇရာ၊ မရဏ ၊ သောက ၊ ပရိဒေ၀ ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒေါမနသ ။ ဥပါယာသော ။
ပဋိသန္ဓေ နေရတဲ့ အတွက် အိုမင်းခြင်း ။သေဆုံးခြင်း ။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း ။ ငိုကြွေးခြင်း လွန်စွာပူပန်ခြင်းတို့ဖြစ်ရသတဲ့
၁၂။ ဇရာ၊ မရဏ ၊ သောက ၊ ပရိဒေ၀ ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒေါမနသ ။ ဥပါယာသော ပစ္စယာ အ၀ဇ္ဇာတဲ့
အိုမင်းခြင်း ။သေဆုံးခြင်း ။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း ။ ငိုကြွေးခြင်း လွန်စွာပူပန်ခြင်းတို့ဖြစ်ရတဲ့ အတွက် အ၀ိဇ္ဇာ ပြန်ဖြစ်သတဲ့။
ဒီ(၁၂)ချက်က အကိုတို့တစ်တွေ မရေမတွက်နိုင်အောင်လည်ခဲ့ပြီနော်။ ကျောင်းတုန်းက ယုတ္တိဗေဒ မှာသင်ခဲ့ရတာက အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေဟာ တစ်နေရာထဲကို
ပြန်ပြန်ရောက်နေလို့ရှိရင် အဲဒါ ကရွတ်ကင်းလျှောက်အမှားတဲ့ ။ ကရွတ်ခွေ ဆိုတာတော့သိမှာပေါ့။ ရန်ကုန်သူတွေဆိုတော့ သောက်ရေအိုး ထားကြတာမဟုတ်ဘူး ရေသန့်ပဲသောက်ကြတာဆိုတော့ ကရွတ်ခွေ ဆိုတာမြင်ဖူးပါ့မလားမသိဘူး ။ ကရွတ်ခွေဆိုတာက သောက်ရေအိုးကို ဒီအတိုင်းတည်ထားရင် မငြိမ်ဘူးလေ။ အဲတော့ရေအိုး အောက်ကနေ ငြိမ်အောင် ခံပေးရတဲ့ အခွေကိုပြောတာ။ ရေအိုးရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုချည့် ဖြတ်ထားတာနဲ့တူတယ် ။ အဲဒိတော့ ကရွတ်ခွေပေါ်မှာ ကင်းကလျှောက်နေတော့ဒီနေရာချည့်ရောက်ရောက်နေတာကိုပြောတာ။ အဲဒိတော့ ကရွတ်ကင်လျှောက်များနေမှန်းသိရင်သိချင်း ပြင်ရမှာပေါ့။ အမှားပ်ြတယ်ဆိုတာနောက်ကျတယ်မရှိပါဘူး ။ သိနေပါရက်နဲ့ မပြင်ပဲ ဆက်သွားနေရင်သာ နောက်ကျ သွားမှာပါနော်။ အကိုတို့တွေကတော့ ဇာတိ ဆိုတဲ့နေရာမှာ လူ့ဘ၀ ချည့်ရခဲ့တာဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး ။ ၃၁-ဘုံ ကျင်လည်နေခဲ့ကြရမှာပေါ့။
အဲဒိတော့ စောစောက အကိုပြောခဲ့တဲ့ ကွင်းဆက် ၁၂ ချက်ကို မှီတဲ့နေရာကနေ ရပ်တန့်သွားအောင် ကြိုးစား ကြရအောင်နော် ။ ဒီစာလေးကို ညီမလေးတွေ့ တိုင်း နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အကိုလည်း အဲဒိလိုလုပ်ကြည့်မယ်။ စာလည်းရှညသွားပြီ။ စာအုပ်ထဲက ကူးပေးလိုက်တာချည့်ပဲ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်တဲ့အလာပသလာပ တွေ ပြန်ရေးပေးလိုက်တာနဲ့စာရင်တော့ ညီမလေးအတွက် တန်ဘိုးရှိတဲ့နှစ်သစ်လက်ဆောင်ဖြစ်မှာပါ။ ညီမလေး နှစ်သစ်မှာ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ။
တူမကြီးရဲ့ အဘနီ ရေးတဲ့ ပိုစ်ကို ဖတ်သွားပါတယ်။
မနေ့က ညီမလေး တစ်ယောက်ဆီက နှစ်သစ်ဆုတောင်းစာလေးရောက်လာလို့ ရောက်တတ်ရာရာ ကောင်းနိုးရာရာလေးပြန်ရေးပေး(အဲလေ- စာအုပ်ထဲကနေပြန်ကူးပေး) လိုက်တာလေးပါ ။ပို့တင်ရတာတင်မဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့  login 0င်လို့မရဘူး။ ရပြန်တော့လည်း စာတစ်မျက်နှာပြောင်းလိုက်ရင်ကို ပြန်ပြန်ထွက်သွားလို့ ပြန်ဝင်နေရတာ အကြိမ်တစ်ထောင်လောက်ရှိမယ်။ ပတ်စ်ဝါတ် တစ်ကြိမ် ရိုက်လိုက်တိုင် နှစ်ဆယ်ရရင် ဟီးးးးး သူကြီးမွဲမယ်။ ပို့စ်အသစ်တင်မယ် ဆိုတော့လည်းမရပြန်ဘူး။ အရင်တင်ထားတဲ့ပို့စ်က ခဏခဏ ပြန်ပြန် publish လုပ်ရင်းနဲ့ မှားနှိပ်မိပြီး draft ဖြစ်သွားတာပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်ထည့်အဲဒစ်လုပ်တင်လိုက်ရတာ (ဟီး မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် =ဒါမျိုးကျ ဘယ်သူမှသင်မပေးရဘူး လုပ်ရ်းနဲ့သိထားတာ) .. အရင်တင်တဲ့ပ်ို့စ်ကို သူကြီးပြင်ပေးထားတာကျေူဇူးတင်ပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ဖြစ်ရတာလည်းပါပါတယ်။ နောက်လည်းပြင်ပေးပါ။ ငေါက်စရာရှိရင်လည်းငေါက်ပါ။ အားမနာပါနဲ့။
ဒါဆို အဘနီကို အားမနာတော့ဘူးနော်.. ငေါက်တော့မယ်နော်.. ငေါက်ပြီ… 123 ဟဲလို.. Testing မိုက်စမ်းတာ တရွာလုံးကြားအောင် ငေါက်ချင်လို့.. ဟီးဟီး.. နောက်တာနော်..
တိုင်စာတင်လို့ရဖို့ ( Report this post (သတင်းပို့ရန်အတွက်သာ))ထည့်ပြီးနောက်မှာ တိုင်စာတွေ အလွန်များပြားစွာရပါတယ်။ Direct email တွေလည်း အများကြီးရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာတွေ့ရတာပါ။
၁) – စာခိုးခံရသူတွေအတွက် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဖက်က ဖြေရှင်းစာ ရေးပါမယ်။
Mandalay Gazette Website ကို Forum လိုသဘောထားမြင်ကြည့်ပါ။ Member ဖြစ်ပြီးရင် စာတင်ချင်တဲ့သူက စာတွေတင်ချင်သလိုတင်နိုင်တာပါ။ အဲဒီတင်တဲ့စာကို တင်သူကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်ရမှာပေါ့။ Admin, Editorsတို့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူများစာတွေမှန်းသိနိုင်မှာလည်း။ တက်လာတဲ့စာကို Editorက ဘယ်လိုလုပ်တာဝန်ယူနိုင်မှာလည်း၊ ယူအက်စ်မှာ ညအချိန်က မြန်မာပြည်မှာနေ့အချိန်မို့နာရီနဲ့မလပ်လည်း ကြည့်မနေနိုင်ပါ။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ကလူတိုင်း နေ့လည်မှာ ပုံမှန်ရုံးအလုပ်သွားပါတယ်။ MG Website အတွက်အချိန်ပြည့်ဘယ်သူမှ အလုပ်လုပ်မနေပါ။
ဒါပေမဲ့တိုင်စာတချို့ မှာ စာတွေခိုးချနေတာ သတင်းစာက တာဝန်မယူနိုင်တာမို့ခိုးချမီဒီယာ၊ သူခိုးအားပေးမီဒီယာ၊ ကော်ပီပေ့စ်မီဒီယာ အစုံပြောကြပါတယ်။ အင်မတန်ဝမ်းနည်းစ၇ာပါ။ ငွေကြေးအရလည်း အလုံးစုံအကုန်အကျခံရတယ်။ ဆဲဆို ပြောကြတာလည်းခံရတယ်။
ဆိုတော့ ..တကယ်လည်း သူများစာတွေကူးတင်ကြတာ အလွန်များပါတယ်။ အဲင်္ဒီအတွက်လောလောဆယ်တော့ တောင်းပန်ရမှာပါပဲ။ တကယ်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။
တင်တဲ့စာတွေမှာ ခိုးချ၊ ကော်ပီကူးတာတွေများတော့ ဘယ်အယ်ဒီတာမှလည်း ထိုင်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ တရက်တရက်တက်လာတဲ့စာတိုင်းလည်း နာရီနဲ့ချီပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဖိုရမ်သဘောနဲ့မြင်ကြစေချင်တာပါ။ မင်န်ဘာတိုင်း ကိုယ့်စာကိုယ်.. ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူကြစေချင်တာပါ။ တခြားဖိုရမ်တွေနဲ့မတူတာက ဒီမှာ တရက်တရက် Log in ၀င်လာရင်လည်း ငေ၊ွပေးတယ်. ကော်မန့်ရေးချင်တာရေး ငွေပေးတယ်. စာတင်ချင်တာတင် ငွေပေးတယ်။ ငွေပေးတာနည်းပေမဲ့ လူအရေအတွက်များတာမို့ငွေပမာဏ မနည်းလောက်ဘူးလို့ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခွင့်အလမ်းကို တလွဲသုံးကြတာမို့ပွိုင့်ပေးစံနစ် အားလုံးပြန်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မဂ္ဂဇင်း၊ဂျာနယ်တွေဆီ သတင်းစာမူပို့ရင် မည်သူမဆိုဟာ ပို့ ချင်တာပို့လို့ရပါတယ်။ တိုက်ကိုရောက်ပြီးမှ အယ်ဒီတာက စာတွေဖွင့်ဖေါက်ပြီး တခုချင်းဖတ် .. ကြိုက်တာကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့စာမူမှာ စာမူပို့ သူက တာဝန်ယူဝန်ခံထားရတာတွေပါပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ရတယ်။ တခြားတိုက်ကိုပို့ မထားဖူး ဘာသာပြန်ဆို မူရင်းကို ညွှန်းရတယ်။ စတာတွေက သတင်းသမား၊ စာရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာဖြစ်လိုသူတိုင်းလိုက်နာရမဲ့ ပြောပြစရာမလိုတဲ့ စည်းကမ်းတွေပါ။ အဲဒီပို့ လာတဲ့စာတွေကို ဒါတွေက သူတပါးစာမူတွေလို့ အယ်ဒီတာက ဘယ်လိုလုပ်စစ်နိုင်မှာလည်း၊ သိနိုင်မှာလည်း..။
သဘောတူတူပဲ… ဒီဝက်ဆိုက်မှာ တင်ချင်တာလာတင်.. အယ်ဒီတာက ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလည်း ..။စစ်နိုင်မှာလည်း..။
ဒါပေမဲ့ အခုလိုကူးယူတဲ့စာတွေအတွက် တောင်းပန်ရမှာပါပဲ။ မူရင်းစာမူ ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။နောင်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ လုပ်သင့်တဲ့ အကြံဥာဏ်ကောင်းရှိရင်လည်း ပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
၂) စာတင်နေသူများ ခင်ဗျား။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ စာရေး။ သတင်းရေးတတ်အောင်အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါ။ အဲဒီကနေ တဆင့်တက်လို့ ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ ထိုက်တန်တဲ့ငွေကြေးရပြီး ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခံရဖို့အခွင့်အလမ်းလဲရှိနေပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ တခုတည်းသော မြန်မာသတင်းစာမှာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဖေါ်ပြခံရမှာပါ။ အဲဒါကို သတိထားကြစေလိုပါတယ်။ အဓိပါယ်မဲ့စာတွေ ဟိုကကူး၊ ဒီကကူးမလုပ်စေချင်ပါဘူး ၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပထမ စာမျက်နှာဟာ အင်မတန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာမှန်းမသိ။ ညာမှန်းမသိ စာတက်လာပြီးရော၊ ငွေရပြီးရော သူများစာတွေ ခိုးယူမတင်စေလိုပါဘူး။ ကိုယ့်စာကိုယ်ရေးတယ်ဆိုပြီးလည်း စာတပိုဒ်ရေးလိုက် ပိုစ့်တခုတင်လိုက် မလုပ်ကြစေချင်ပါဘူး။ အဲဒီတင်တဲ့စာကနေ ကိုယ်က ငွေကြေးတန်းဖိုးတခုရယူတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်အားကိုလည်း တန်ဖိုးရှိအောင် ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သေသေချာချာ လုပ်ပါ။ တာဝန်ယူပါ။
သူများပင်ပန်းစွာ တန်ဖိုးထားရေးထားတဲ့စာကို ကူးယူပြီး ပြီးပြီးရောတင်တာဟာ အင်မတန်ကိုရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ မူရင်းစာရေးသူဆီက ခိုးယူတာနဲ့တူတူပါပဲ။ ငွေတမျိုးထဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရော ခိုးယူတာပါ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီစာမျိုးကို ကောင်းလှပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြလိုက်မယ်။ အဲဒီကမှ ယူအက်စ်က အသင်းအဖွဲ့ တက္ကသိုလ်တခုခုက ဖတ်မိပြီး ဆုပေးမယ်။ ယူအက်စ်ကို စာမူရှင်ကို ခေါ်ယူပြီး ကျောင်းဆက်တက်စေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း.။
အဲဒါကြောင့်နစ်နာရတဲ့ မူရင်းစာရေးသူကို ဘယ်လို လျှော်စားပေးမလဲ…။
(တခါမကဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီက စာတပုဒ်ကို ကောင်းလှပါချည်ရဲ့ဆိုပြီး တင်တဲ့သူကို ခရက်ဒစ်ပေးလို့ အီးမေးလ်နဲ့လက်ဆင့်ကမ်းကြရင်း နောက်ဆုံးမူရင်းပိုင်ရှင်က ထွက်လာတော့ အားလုံးအရှက်ရပါတယ်။ မီဒီယာလည်း အင်မတန် သိက္ခာကျပါတယ်။)
သတင်းဆိုရင်လည်း မန္တလေးဂေဇက်ဟာ အေပီ။ အေအက်ဖ်ပီ။ ရိုက်တာ အကုန်လုံးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းကို လက်လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ သတင်းစာကို ယူအက်စ်စာကြည့်တိုက်တွေမှာ မော်ကွန်းထား သိမ်းထားတယ်။ အမေရိကန်သံရုံးကဖတ်တယ်။ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်မှာထားတယ်။ ဒါတွေသိပါသလား..။
ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ တရက်ကစပြီး ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းပါမယ်။
သတင်းကိုသာ အဓ်ိကထားတင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်သတင်းကို ဘာသာပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်စာတွေကို ပို့စ်မှာ အရင်ဆုံး စာတ၀က်လောက်အထိ ကူးတင်ပြပါ။ အပြည့်ဖတ်ချင်သူတွေဖတ်နိုင်အောင် နောက်မှ Website Link ကို ပြပါ။ခေါင်းစဉ်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာအတိုင်းဖေါ်ပြပါ။ သတင်းတူ တွေ၂ခုလောက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ဘာသာပြန်ပါ။အောက်မှာ Comment နဲ့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါ။ သတင်းတိုင်းဟာ ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိ၊ သူများအတွက်လည်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
event တွေ။ ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အလှူခံတာတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေကိ်ု ဖလိုင်ယာ၊လက်ကမ်းစာစောင်တွေကနေ ကူးတင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ရေးမဟုတ်ရင်၊ မတိကျတဲ့ သတင်းတွေဆိုရင် သက်ဆိုင်သူကို ခရက်ဒစ်တိတိကျကျပေးပြီး (Website URL ရှိရင် Link နဲ့တကွ)Category မှာ တင်တဲ့စာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Category ရယ်။ Copy/Paste Category ကိုပါရွေးပြီးမှ စာတင်စေလိုပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အယ်ဒီတာက အချိန်ရှိရင်ရှိသလို စိစစ်ပြီး ပွိုင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
( တချို့ မန်ဘာတွေက သာမန်မန်ဘာမဟုတ်ပဲ Author အဖြစ်အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ ပုံမှန် မန်ဘာက Subscriber ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသူတွေအတွက် အခုစည်းကမ်းတွေက မသက်ဆိုင်ပါ)
မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။Tagထည့်ပါ။Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ
Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ စာမူရေးသားရာတွင် စာလုံးများကို Spaceခြားပါ။
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို သတိထားစစ်ဆေးပါ။
ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ ကူးတင်ခွင့်မရှိ။
လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော စာများမတင်ရ။
ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောစာများအား ပွိုင့်မပေးပါ။
ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များကို ပွိုင့်မပေးပါ။
မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ။
ပိုစ့်တိုင်းတွင် (မှတ်ချက်ရေးပြီးသတင်းပို့ပါ) ဟု တောင်းဆိုထားသည်။
အထက်ပါအချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်ယူဆပါက သတင်းပို့စေလိုသည်။
အယ်ဒီတာများမှ တိုင်ကြားစာများကြည့်ကာ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း….။
တလအတွင်း (စာမူရှင်မဟုတ်သူများမှ )အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကော်မန့်(Comment) ၁၀ခုနှင့်အထက်ရေးသားခံရသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
တလအတွင်း ဖတ်သည့်အကြိမ် (View)၁၀၀၀ နှင့်အထက်ရှိသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
– ဖော်ဝပ်မေးတွေဆိုပြီးလည်း သူများစာတွေကို ကူးမတင်ကြစေလိုပါဘူး။ အဲဒါတွေကို စာဖတ်သူတော်တော်များများကလည်း ဖတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါ။
Mandalay Gazette ကို ဘာသာပြန်ရင်…ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ ဖြစ်တာမို့သတင်းတွေတော့တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်းက သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေမှာပါတဲ့ ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပေါ့။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ထောင်တာရဲ့ရည်ရွက်ချက်တခုဟာ ပြည်တွင်း-ပြည်ပ မြန်မာပေါင်းကူးဖြစ်ချင်တာမို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမိမြေမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်နေပျက်နေတာတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို ပြည်ပရောက်သန်းနဲ့ချီနေတဲ့မြန်မာတွေ မသိပါဘူး။မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ပြည်တွင်းကသတင်းတွေ ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ပြီး၊ခရက်ဒစ်ပေးပြီး တင်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေတင်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကတော့ တိုက်ရိုက်မကူးချစေလိုပါ။ အဲဒီမှာ သွားဖတ်လည်း ရတာမို့ ပါ။ အဲဒီနောက်မှာမှ ကောမန့်နဲ့ အကောင်းအကျိုးဆွေးနွေးနိုင်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်..။ ကိုယ့်စာမူ၊ သတင်းအတွက် တခြားသတင်းတွေကို ခရက်ဒစ်ပေးပြီး ကိုးကားတာမျိုးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်သတင်းရေးနိုင်ရင်တော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်း ရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူအတွက် ဥပမာပြောရရင်…ဒီနေ့စကော့ဈေး(ဗိုလ်ချုပ်ဈေး)ရဲ့ ဈေးရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ နေ့စဉ်ဓါတ်ပုံတပုံ သတင်းတခုဟာမထူးခြားဟန်ရှိပေမဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအတွက်တော့ အမိမြေအလွမ်းလည်းပြေ။ ပြန်လည်းအမှတ်ရစေတာပေါ့နော၊ သတင်းေ၇းတာမှာ ဘာကြိုတင်သတ်မှတ်စည်းကမ်းမှ လိုက်နာဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်သိသလို သူများသိစေရန်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီး ရေးနိုင်ရင်ဖြစ်ပါပြီ။ သတင်းကမသေချာရင် မသေချာဘူးတော့ေ၇းပေးပါ။ ကိုယ့်အယူအဆထည့်ရင် ကိုယ့်အယူအဆလို့ရေးပါ။ ဓါတ်ပုံတပုံဟာ စကားအများကြီးပြောတာမို့ ဓါတ်ပုံတပုံတင်လည်း သတင်းဖြစ်တာပါပဲ။
– စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတော့ မှားကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အလေ့အကျင့်လေးလုပ်ပြင်စေချင်တာပါ။ ပွိုင့်မလျှော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မှားတာတွေ့ရင် အောက်မှာ အမှန်သိသူက ကောမန့်နဲ့ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြန်မာစာမမေ့မလျှော့အောင် သတ်ပုံမမှားအောင် လုပ်ကြတာပေါ့နော။
– Tagကို ကော်မာခံတယ်ဆိုတာ..ဥပမာ၊ “လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော” ဆိုတဲ့စာကို Tag လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ လူမျိုးရေး, ဘာသာရေး, အသားအရောင်, ခွဲခြားမုန်းတီးမှု လို့လုပ်စေလိုတာပါ။Tagဟာ Search Engineတွေနဲ့တွဲပြီးလည်း အလုပ်လုပ်တာမို့နောက်နောင် နှစ်တွေကြာလည်း ရှာလွယ်ပါတယ်။
– စာမူတွေကိုပွိုင့်ပေးတာဟာ နည်းကောင်းနည်းပါလိမ့်မယ်။ မန္တလေးဂေဇက်မှာ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် လစဉ်ဖယ်ထားတဲ့ငွေရှိပါတယ်။ အဲဒီဘောင်ထဲကနေ (အလျှင်းသင့်သလို)ကောင်းတဲ့စာမူတွေအတွက် ပွိုင့်တိုးပေးသွားမှာပါ။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ရွေးချယ်စာမူ၊သတင်း ဆိုပါတော့။
– Site Admin >Dashboard မှာ Category ရွေးဖို့ နကိုအတိုင်းရှိပါတယ်။ တခြားသူတွေရော ဒီလိုဖြစ်သလား ရေးကြပါဦး။
– နံပါတ်လေး အချက်ဘာကြောင့်တားသလည်း တနေရာမှာ ရှင်းပြဖူးပါတယ်။ ထပ်ရေးရရင် သူတို့ အပင်ပန်းခံလိုက်ထားတဲ့သတင်းကနေ စာကူးတင်သူမန်ဘာက ပွိုင့်ယူရင် မတရားတာကတချက်။ ပြည်ပေ၇ာက်မြန်မာ မီဒီယာအချင်းချင်း မူပိုင်ခွင့်ကိစ်စတွေ စကားမပြောချင်တာက တချက်ပါ။ (အရင်က အဲဒီလိုကူးတင်တဲ့ပို့ စ်တွေအတွက် သူတို့က ကန့်ကွက်စာပို့ ကန့်ကွက်ဖူးပါတယ်။)
ကိုkai က မိုက်ကယ်အောင်ပုကို ရွာစောင့် ဒရ၀မ်ငှားလိုက်တာ များလား မသိဘူး ပို့စ်တိုင်းမှာ ဒါတွေပဲ မန်းနေတယ် ။
လုပ်သင့်တာ မလုပ်ခဲ့မိ လေခြင်း၊ မလုပ်သင့်တာ လုပ်ခဲ့မိ လေခြင်းလို့ နောင်တရ
> စိတ် ပူပန်နေတာ မျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အသိမှန်၊ သတိမှန်ရတဲ့ အချိန်ကစပြီး
> လုပ်သင့်တာလုပ်၊ မလုပ်သင့်တာ မလုပ်ဘဲနေရင် မသေခင် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ ကျေနပ်စရာ
ပညာကြီးရင့်ခြင်း(8)ပါးထဲမှာ ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖော်ရခြင်းကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ သိချင်ပါတယ်၊ သိသလောက်တော့ ရှင်းပြပေးပါဦးနော် အခြားသိချင်တာလေးတွေလဲ mail ထဲမှာမေးထားပါတယ်
ကိုယ်က သူများလို စာရေးထက်တာမဟုတ်ဘူး
ကြိုးစားပမ်းစား (ကြိုးစားရင် အီရှည်တယ်ဆိုဘဲ)
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စပ်ထားတာ တင်မယ်လုပ်တော့ ဘယ်လိုမှ တင်လို့ မရတော့ဘူး
ပေးမန့် မှာ ချက်ကင်လုပ်တော့လည်း တစ်ခါမန်း ငါးရွှေဒင်္ဂါး ဆိုတော့